100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-arụ ọrụ,Owu Mmiri nke Elu Bay,100W Ọrụ Fixtures
Home > Ngwaahịa > Ibu Ọrụ > Umu Obu Obu Uhie > 100W High Bay LED Nwa Oge Ọrụ Light Ngwunye
Ihe Nlereanya.: bb-HJD-100W-Q
Osisi a dị elu mere ka ìhè rụọ ọrụ bụ ngbanwe zuru oke maka oriọna ọkụ 300W, na-echekwa ruo 80% na ụgwọ ọkụ eletrik gị. Ọrụ anyị na- adịru nwa oge A na-ejikọta ọkụ dị iche iche site na ntinye nkwụnye na ụdọ ike jikọtara ya na plọg, na-ahapụ gị ka ị jikọọ na ọtụtụ ọkụ na-echekwa plọg. IP65 waterproof (ọbụna akụkụ nkwonkwo) na-eme ka ọrụ a Industrial Work Lens ọkụ zuru okè maka n'èzí, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ. Ndị nche ụlọ a na-anaghị edozi na-adịgide adịgide, na-egbochi ma ọ bụ na-echebe ya ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nchebe ọdịnala nke ígwè na ìhè ọkụ nke ọkụ na-egbuke egbuke. A na-ebugharị aka na-eme ka ihe nkedo ọkụ ọrụ a dị mfe ibu na itinye.
Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-arụ ọrụ Owu Mmiri nke Elu Bay 100W Ọrụ Fixtures Egwuregwu Ndị Na-arụ ọrụ 150W Egwuregwu Oké Osimiri Na-arụ Ọrụ Egwuregwu Ngwá Ọdụ Mpaghara Egwuregwu Ndị Na-ahụ Maka Ọkụ Egwuregwu ọkụ ọkụ